पोर्न र यौन संचारित संक्रमण - इनाम फाउन्डेशन
यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई), को रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ यौनजन्य रोगहरू (एसटीडी) र वनस्पति रोगहरु (वीडी), सामान्यतया यौन द्वारा फैलाउने संक्रमणहरू छन्, विशेष गरी योनि संक्रमण, गुदा सेक्स र मौखिक सेक्स। प्रायः एसटीआइहरूले लक्षणहरू गर्दछन्। यसले यस रोगलाई अरूलाई माथितरणको ठूलो जोखिममा पार्छ।
पोर्नको दुई फरक भूमिकाहरू छन् हामी कसरी हाम्रो यौन जीवनको बारेमा सोच्न सक्छौं स्वास्थ्य परिणाम हुन सक्छ।
पहिलो, यदि तपाइँ अश्लील र हस्तमैथुन हेर्दै हुनुहुन्छ भने, तर कसैसँग यौन सम्बन्ध राख्नु हुँदैन, तपाइँ कुनै संक्रामक एसटीआई कोच्याउन सुरक्षित हुनुहुन्छ। यो बिल्कुल सत्य हो, तर यो सम्पूर्ण कथा होइन। तपाईं अझै पनि स्वास्थ्य समस्याहरूको लागी हानिकारक हुनुहुन्छ जुन सिक्नका लागी संक्रमित हुन्छन्। यदि तपाईं एकजना मानिस हुनुहुन्छ भने, धेरै अश्लील हेर्न को लागी तपाइँ अझै पनि अश्लील-प्रेरित परिशुद्धता विकास (PIED), एर्गोरसमिया वा क्षणमा विलम्बन संग सम्भावना लामो-समय समस्याहरूमा आफैंलाई लुकाइरहेका छन्। यदि तपाई महिला हुनुहुन्छ भने तपाईंको अश्लील दृश्यले वास्तविक पार्टनरहरूसँग यौन आघातको तुलनामा यौन बानीहरू वा हस्तमैथुनलाई प्राथमिकता दिन तपाईँको शरीरलाई प्रशिक्षण दिन सक्छ। भारी अश्लील दर्शकहरू गलत खेलको लागि शारीरिक रूपमा प्रशिक्षण गर्दैछन्।
दोस्रो, अश्लील हेर्न गरेर, तपाइँलाई मानसिक रूपमा यौन यौन प्राथमिकताहरू तपाइँ अश्लीलमा के देख्न चाहने दोहोर्याउन चाहनुहुन्छ। प्राय: प्राय: पोर्न अश्लील कन्डोम-मुक्त क्षेत्र हो। यसले तपाईंको दिमागमा इच्छालाई अन्तर्वार्ता वा अन्य शारीरिक बाधाहरू जस्तै दन्तको दाँतलाई क्यान्समलाई मौखिक सेक्स गर्दा बेवास्ता गर्न सेट गर्दछ।
सेक्स यौन व्यवहारहरू सुरक्षित गर्नुहोस् कन्डोमको प्रयोग, सानो यौन साझेदारहरूसँग, र सम्बन्धमा रहेको छ जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले अर्कोसँग यौन सम्बन्ध पनि जोखिम घटाउँछ। सबैभन्दा ठूलो हत्यारा एचआईभी र एचपीवी हुन्। यहाँ तिनीहरूको बारेमा केहि आधारभूत जानकारी हो।
मानव इम्युनोडेफिशिटी भाइरस (एचआईवी) कारणले गर्दा एचआईभी संक्रमण र अधिक समय इम्युनोडेफिनिटी सिंड्रोम प्राप्त भयो (एड्स)। एचआईभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संक्रामक रोगहरु को सूची मा, रैंक संख्या2ग्रह मा सबै भन्दा घातक रोगहरु मध्ये एक हो। 2014 मा यो 1.4 मिलियन मान्छे को बारे मा मारे र यसको बारे मा 35 मिलियन अन्य मान्छे संग रह रहे थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकामा 1.1 मिलियन व्यक्तिहरूको बारेमा यो छ, तर लगभग एक-आठ थाहा छैन, रोगलाई संक्रमणको सन्दर्भमा उनीहरूलाई अत्यन्त उच्च जोखिम बनाउने।
मानव Papilomavirus वा HPV सानो आकारको डीएनए भाइरस हो जुन शरीरको छाला र गीला सतहहरू जस्तै मुख, योनि, ग्रीवा र गुनासोमा असर गर्दछ। 100 भन्दा फरक प्रकारका HPV भन्दा धेरै छन्। प्राय: सामान्य प्रकारका छालाहरू पाईन्छ र हातमा देख्न सकिने रूपमा देखा पर्छन्। केहि एचपीवी प्रकारहरू पुरुष र महिलाहरूको जननाशक क्षेत्रमा पनि संक्रमित गर्दछ। जेनेटल एचपीवी अमेरिका र विश्वव्यापी मा सबैभन्दा सामान्य यौन संचारित संक्रमण हो। कम्तिमा 40 HPV प्रकारहरू छन् जुन जनसाधारण क्षेत्रमा असर गर्न सक्छ। यीमध्ये "कम जोखिम" हो र जननांगीय मौनहरू हुँदा "उच्च जोखिम" प्रकारहरूले ग्रीवा वा अन्य प्रकारको जननाशक क्यान्सरको कारण हुन सक्छ। उच्च जोखिम एचपीभी प्रकारहरूले गर्दनको क्यान्सरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ, जसलाई अरोफरीनजिक क्यान्सर भनिन्छ, जुन अमेरिका र यूरोपमा अधिक सामान्य हुन्छ।
एचपीवी भाइरसहरू लामो समयदेखि जननांग क्षेत्रमा उपस्थित छन् र ग्रीवा, भल्वर, पेनिल र एएनजेनेटल क्यामेराको महत्त्वपूर्ण कारण हुन जान्छन्। यो मानिएको छ कि धेरै मानिसहरु धेरै साझेदारहरु संग यौन क्रियाकलापमा संलग्न छन् र मौखिक सेक्स अभ्यासहरुमा व्यस्त हुन्छन् र परिणामस्वरूप हेप्रो र गर्दन क्षेत्रमा एचपीवी ठेकेदार गर्दै छन्, जसको कारण अनातोरीएनक्स कैंसरको उच्च दर हो। HPV को थप विस्तृत परिचय पाउन सकिन्छ यहाँ.
त्यहाँ धेरै अन्य एसटीआइहरू छन् जुन कम सम्भावित घातक रोगहरू छन्, तर तिनीहरू तपाईंको स्वास्थ्यको लागि अझै खराब छन्। अरू कसैलाई एक रोग दिन यो राम्रो विचार हो!
यदि तपाइँ यौन सक्रिय हुनुहुन्छ भने, यौन स्वास्थ्य पेशेवरहरूको सल्लाह वा समर्थन पाउँदा सधैं बुद्धिमानी हुन्छ।
Glasgow मा हामी सिफारिस गर्दछौं स्यान्डिफर्ड, जसले समलैंगिक र द्वि पुरुषहरूको लागि विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दछ स्टीव रकेटसन परियोजना। एडिनबर्गमा जाने मानिसहरू हुन् लथियन यौन स्वास्थ्य.